Park Bo Gum နဲ့ Drama ဇာတ်ကားသစ်ရိုက်ကူးတော့မယ့် Suzy
23 Apr 2018 . 11:56 AM
SBS Drama ကားသစ်ဖြစ်လာမယ့် People of Incheon Airport Drama ဇာတ်လမ်းမှာ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ မင်းသားချောလေး Park Bo Gum နဲ့ ယောက်ျားထုတိုင်းကို ကြွေစေတဲ့ အဆိုတော်မင်းသမီးချောလေး Suzy တို့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုပြီး သတင်းတွေတော့ထွက်လာပါပြီ။
၂ယောက်လုံးကတော့ ဒီဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းဆောင်မင်းသား၊ မင်းသမီး အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ဖို့ ကောင်းမွန်တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေရှိခဲ့ပေမယ့် ၂ဖက်လုံးရဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ အတည်ပြုဖို့ တရားဝင်မကြေငြာသေးပါဘူး။
ဒီရုပ်သံဇာတ်လမ်းကို Incheon အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ အခြေတည်မှာဖြစ်ပြီး လေဆိပ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရဲ့ နောက်ခံအခြေအနေအမျိုးမျိုး၊ ကမ္ဘာအနှံ့က လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးကို ရိုက်ကူးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုက်ကူးဖြစ်ခဲ့ရင် Park Bo Gum ကတော့ လေဆိပ်တစ်ခုလုံးရဲ့ စီမံခန့်ခွဲဌာနက ဝန်ထမ်း Kang Kichan နေရာက ပါဝင်ရမှာဖြစ်ပြီး Suzy ကတော့ အမှားတွေအများကြီးလုပ်တတ်တဲ့ လေဆိပ်ခရီးသည် ဝန်ဆောင်မှုဌာနဝန်ထမ်းအနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ရမှာပါ။
ဒီသတင်းထွက်လာတာနဲ့ ပရိသတ်တွေကြားထဲမှာတော့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြည့်နှက်နေကြပါတယ်။ မင်းသားမင်းသမီး ၂ယောက်လုံးဟာ အရင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေတိုင်းမှာ တွဲဖက်မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပီပြင်လွန်းလို့ နာမည်ကြီးနေတာကြောင့်ပါပဲ။
Suzy ဆိုရင် တွဲဖက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မင်းသားတော်တော်များများနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့ပြီး Park Bo Gum ဟာဆိုရင်လည်း Love in the Moonlight ဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီးချောလေး Kim YooJung နဲ့ ပရိသတ်တွေ သဘောတူပြီး “Booyoo” Couple လို့ တင်စားခံရတဲ့ထိကို အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ဒီဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ၂ဦးလုံးရဲ့ ပရိသတတ်တွေ ရင်ထိတ်ရဦးမလား? သရုပ်ဆောင်ရင်း သံယောဇဉ်တွယ်တာမှုလေးတွေ ရှိလာဦးမလား? ပရိသတ်တွေ သဘောတူခံရဦးမှာလားဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲပါပဲ။
Park Bo Gum နဲ့ Drama ဇာတျကားသဈရိုကျကူးတော့မယျ့ Suzy
SBS Drama ကားသဈဖွဈလာမယျ့ People of Incheon Airport Drama ဇာတျလမျးမှာ ပြိုတိုငျးကွိုကျတဲ့ မငျးသားခြောလေး Park Bo Gum နဲ့ ယောကျြားထုတိုငျးကို ကွှစေတေဲ့ အဆိုတျောမငျးသမီးခြောလေး Suzy တို့တှဲဖကျသရုပျဆောငျတော့မယျဆိုပွီး သတငျးတှတေော့ထှကျလာပါပွီ။
၂ယောကျလုံးကတော့ ဒီဇာတျကားနဲ့ ပတျသကျပွီး ခေါငျးဆောငျမငျးသား၊ မငျးသမီး အဖွဈ သရုပျဆောငျဖို့ ကောငျးမှနျတဲ့ဆှေးနှေးခကျြတှရှေိခဲ့ပမေယျ့ ၂ဖကျလုံးရဲ့ တာဝနျရှိသူတှကေတော့ အတညျပွုဖို့ တရားဝငျမကွငွောသေးပါဘူး။
ဒီရုပျသံဇာတျလမျးကို Incheon အပွညျပွညျဆိုငျရာလဆေိပျမှာ အခွတေညျမှာဖွဈပွီး လဆေိပျမှာအလုပျလုပျတဲ့လူတှရေဲ့ နောကျခံအခွအေနအေမြိုးမြိုး၊ ကမ်ဘာအနှံ့က လူတှနေဲ့ ဆကျဆံရတဲ့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးကို ရိုကျကူးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
ရိုကျကူးဖွဈခဲ့ရငျ Park Bo Gum ကတော့ လဆေိပျတဈခုလုံးရဲ့ စီမံခနျ့ခှဲဌာနက ဝနျထမျး Kang Kichan နရောက ပါဝငျရမှာဖွဈပွီး Suzy ကတော့ အမှားတှအေမြားကွီးလုပျတတျတဲ့ လဆေိပျခရီးသညျ ဝနျဆောငျမှုဌာနဝနျထမျးအနနေဲ့ သရုပျဆောငျရမှာပါ။
ဒီသတငျးထှကျလာတာနဲ့ ပရိသတျတှကွေားထဲမှာတော့ စိတျဝငျစားမှုတှေ၊ စိတျလှုပျရှားမှုတှေ ပွညျ့နှကျနကွေပါတယျ။ မငျးသားမငျးသမီး ၂ယောကျလုံးဟာ အရငျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှတေိုငျးမှာ တှဲဖကျမငျးသားမငျးသမီးတှနေဲ့ သရုပျဆောငျခကျြတှေ ပီပွငျလှနျးလို့ နာမညျကွီးနတောကွောငျ့ပါပဲ။
Suzy ဆိုရငျ တှဲဖကျရိုကျကူးခဲ့တဲ့ မငျးသားတျောတျောမြားမြားနဲ့ ခဈြသူဖွဈခဲ့ပွီး Park Bo Gum ဟာဆိုရငျလညျး Love in the Moonlight ဇာတျကားထဲက မငျးသမီးခြောလေး Kim YooJung နဲ့ ပရိသတျတှေ သဘောတူပွီး “Booyoo” Couple လို့ တငျစားခံရတဲ့ထိကို အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။
ဒီတဈခါတော့ ဒီဒိတျဒိတျကွဲ ၂ဦးလုံးရဲ့ ပရိသတတျတှေ ရငျထိတျရဦးမလား? သရုပျဆောငျရငျး သံယောဇဉျတှယျတာမှုလေးတှေ ရှိလာဦးမလား? ပရိသတျတှေ သဘောတူခံရဦးမှာလားဆိုတာကတော့ စိတျဝငျစားစရာပါပဲပါပဲ။